मुख्य पृष्ठ | सबै एउटै छानामुनि | आकस्मिकताको अवस्थामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर र बसोबास व्यवस्थापन
सबै एउटै छानामुनि
आकस्मिकताको अवस्थामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर र बसोबास व्यवस्थापन
© रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइ.एफ.आर. सी.), जेनेभा, २०१५
स्रोत उल्लेख गरी गैरव्यावसायिक प्रयोजनको लागि यस पुस्तकको पूरै वा आंशिक भागको प्रतिलिपि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसको लागि secretariat@ifrc.org मा अनुरोध गरिए त्यसलाई आइ.एफ.आर.सी. ले सम्मान गर्नेछ ।
यस पुस्तकमा अभिव्यक्त गरिएका विचारले आइ.एफ.आर.सी. वा राष्ट्रिय रेडक्रस वा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीका कुनै पनि नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छैन । यसमा उपयोग गरिएका नाम (शीर्षक) र नक्साले आइ.एफ.आर.सी. वा राष्ट्रिय सोसाइटीका अधिकारीहरूको वा यसको क्षेत्रको वैधानिक अवस्थासम्बन्धी कुनै विचारको अभिव्यक्तिलाई अर्थ्याउँदैन । कुनै अन्यथा अर्थ नलागेमा यस पुस्तकमा उपयोग गरिएका सबै तस्बिरमा आइ.एफ.आर.सी.को अधिकार हुनेछ ।
1258600 03/2015 E 400
Information About Publisher- Red Cross
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवाको लागि स्वयंसेवी संस्था हो । विश्वभर रहेका १८९ वटा हाम्रा सदस्यहरू, राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीसँगै काम गर्दै हामी हरेक वर्ष दीर्घकालिन सेवा र विकास कार्यक्रममार्फत ९ करोड ७० लाख मानिससम्म पुग्ने गर्छौँ । यसैगरी, विपद् प्रतिकार्य कार्यक्रम र शीघ्र पुनः प्राप्ती (early recovery) कार्यक्रममार्फत ८ करोड ५० लाख मानिससम्म पुग्छौँ । बढी जोखिममा रहेका मानिसहरूका स्वास्थ्यसम्बन्धि आवश्यकतालाई पूरा गर्न र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन हामी विपद् पूर्व, विपद्को अवधिमा र पश्चात काम गर्छौँ । हामी कसैलाई राष्ट्रियता, जाती, लिङ्ग, धार्मिक विश्वास, वर्ग र राजनीतिक आस्था कुनै पनि आधारमा विभेद गर्दैनौँ ।
रणनीति २०२० ले निर्देश गरे अनुसार हाम्रो सामूहिक कार्ययोजनाले यस दशकका मानवीय र विकाससम्बन्धि चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नेछ । हामी जीवन बचाउन र सोचमा परिवर्तन ल्याउन प्रतिवद्ध छौँ । हाम्रो बलियो पक्ष भनेको स्वयंसेवी सञ्जाल, समुदायमा आधारित ज्ञान, विज्ञता र हाम्रो स्वतन्त्रता अनि निश्पक्षता हो । हामी विकास साझेदारको रूपमा र विपद् प्रतिकार्यमा मानवीय मापदण्डमा सुधार ल्याउँछौँ । हामी निर्णयकर्तालाई सँधै जोखिममा रहेका मानिहरूको चासोमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्छौँ । परिणामस्वरूप : हामी स्वस्थ र सुरक्षित समुदाय निर्माण गर्छौँ, जोखिमको मात्रालाई न्यून गर्छौँ र विश्वमा शान्तिको संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्छौँ ।